तेस्रोपटक मृत्युलाई जितेकी श्वेताको अस्पताल संघर्षको कथा – Khabar Silo
जीवनमै पहिलोपल्ट अस्पताल पुग्दा श्वेता खड्का सात वर्षकी थिइन्। दसैंको समय थियो। बुवाले किन्दिएको नयाँ लुगा लगाएर उत्साही हुँदै यताउता दौडिरहेकी थिइन्। त्यतिबेलै भर्‍याङमा लडेर हात भाँच्चियोआर्मीमा कार्यरत उनका बुबाले हत्तपत्त उनलाई वीर अस्पताल पुर्‍याए। उपचार सुरु हुन नपाउँदै श्वेता यति डराइन् कि त्यहाँ उनलाई समाउन डाक्टरको ‘महाभारत’ भयो।
‘दुख्यो… दुख्यो… भन्दै डाक्टरलाई गाली गरेर अस्पताल वरपर भागेकी थिएँ। त्यतिबेला मलाई समाउन उनीहरूलाई खुब गाह्रो परेको थियो,’ श्वेताले आफूलाई याद भएपछि अस्पताल पुग्दाको त्यो पहिलो पल अझै बिर्सिएकी छैनन्।‘जीवन कसैका लागि बाँच्ने होइन रहेछ, आफ्नै लागि रहेछ। आफू बाँचेपछि नै समाजले पनि हेर्ने रहेछ। त्यसैले म अब मेरो जीन्दगी मेरो चाहना अनुसार जिउँछु। जे मन लागे, त्यही गर्छु।’
पटकपटक अस्पतालमा फरकफरक रोग र परिस्थितिसँग संघर्ष गरेपछि अहिले अभिनेत्री श्वेता खड्कामा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पूरै बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, यसको प्रभाव उनको जीवनचर्यामा देखिन्छ।कुनै बेला नाइट क्लब जान नरुचाउने उनी आज आफूलाई मनपरेका बेला क्लब धाउँछिन्, नाच्छिन्, पिउँछिन्, दिल खोलेर रमाउँछिन्। आफ्नाबारे समाजले के भन्ला, कसरी हेर्ला, त्यसको कुनै मतलब गर्दिनन्। जे गर्दा आफूलाई खुसी मिल्छ, त्यो गरेरै छाड्छिन्।
भन्छिन्, ‘म त्यतिबेला हस्पिटलमा मरेको भए त मरेकोमर्‍यै हुन्थेँ। यो दोस्रोपल्ट पनि होइन, तेस्रोपल्ट पाएको जीवन हो। त्यसै खेर जान त कसरी दिन्छु र म ?’
यो उनमा त्यसै जन्मिएको आत्मबोध कहाँ हो र ! फर्केर हेर्दा उनको अस्पताल जीवन कम पीडादायी छैन। बिहे गरेको दुई दिनमै उनका श्रीमान् अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो। एक महिनापछि त श्रीकृष्ण अस्पतालबाटै सदाका लागि बिदा भए।
त्यसैले त श्वेता आज भगवानसँग प्रार्थना गर्छिन्, ‘मान्छेलाई यो अस्पताल भन्ने ठाउँ कहिल्यै जानु नपरोस् , कहिल्यै त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना नहोस्। अस्पतालमा पुग्नुजत्तिको पीडादायी पल अरू केही हुँदैन।’
२०७१ साउन २५ गते। यो दिनलाई श्वेता आफ्नो जिन्दगीकै ‘कालो दिन’ ठान्छिन्। कारण, यही दिन दिल्लीको अस्पतालमा उनले आफूलाई मित्र र अभिभावकजस्तो व्यवहार गर्ने श्रीमान् गुमाइन्। त्यसैले भन्छिन्, ‘म यो दिनलाई सम्झनुभन्दा पनि बिर्सन चाहन्छु।’
‘कहाँ भेटिएला’को सुटिङ सेटबाट नजिकिएका उनीहरूले ‘श्रीमान् र श्रीमती’ र ‘कोहिनुर’मा जोडी बाँधेर अभिनय गरिसकेका थिए। त्यही साल असार २३ गते उनीहरूको बिहे भएको थियो।बिहेपछि जानुपर्ने त ‘हनिमुन’ थियो तर नियतिले उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याइदियो। दिल्लीको मनमोहन अस्पतालमा श्रीकृष्ण भर्ना भए।
९ दिनसम्म श्रीकृष्णलाई लगातार आइसियूमा राखियो। श्वेताका लागि जीवनमा पहिलोपल्ट अस्पतालमा ‘कुरुवा’ बस्नुपरेको क्षण त्यही थियो। आइसियूमा राखुन्जेल उनी भिजिटरका रूपमा बिहान र बेलुका दुईदुई मिनेटमात्रै श्रीमान्लाई भेट्न पाउँथिन्। ‘आइसियूमा भेट्न नपाउँदा अस्पतालबाहिरै कुरेर बस्थेँ,’ ती दिन सम्झदा आज पनि उनका आँखा रसाउँछन्, ‘मेरो श्रीमान्लाई केही नहोस् भनेर मन्दिर जान्थे, प्रार्थना गर्थें।’
आँसुको त कुनै हिसाबकिताब नै थिएन। कति रुन्थिन्, कति। आइसियूपछि वार्डमा सारियो। फ्रेस हुन, नुहाइधुवाइ गर्नमात्रै श्वेता होटल जान्थिन्।
वरिपरि बिरामीका आफन्त, नर्स, डाक्टरहरू सोध्थे, ‘बिहे गरेको कति भयो ?’
उनी झुट बोल्दिन्थिन्, ‘पाँच वर्ष।’श्वेताका अनुसार अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो थियो। कुरुवालाई सुत्नका लागि ‘फोल्डिङ मसाज चेयर’ हुन्थ्यो। तैपनि उनका दिन सुतेरभन्दा बढी रोएर बित्थे। गहिरो निद्रा त कहिल्यै लागेन, प्रायजसो होसमै हुन्थिन्। उनलाई देख्नेहरू भन्थे, ‘ये हस्पिटल ऐसा हि जगा है, रोने दो उसको।’
एक महिनासम्म लगातार कुरुवा बस्दा धेरैले उनलाई सोध्थे, ‘तपाईं नर्स हो ?’ कारण, उनी आफ्नो श्रीमान्को हेरचाह नर्ससरह गरिरहेकी हुन्थिन्। श्रीमान्लाई दिएका हरेक औषधिबारे गुगल गर्थिन्।गुगलमा अध्ययन गर्दागर्दा औषधिबारे यति जानकार भइसकेकी थिइन् कि कुन औषधि केको र कतिखेर खाने, औषधिको खोल हेरेरै भन्दिन सक्थिन्। ‘डाक्टरलाई भन्न त मिल्दैन तर त्यो हातमा लगाइएको क्यानुला कतिपल्ट त नर्सलाई नभनीकन म आफै चेन्ज गर्दिन्थेँ,’ उनी सम्झन्छिन्।
एक दिन अति भयो, उनले दाइसँग फोनमा झगडा गरिन्। दाइलाई भनिन्, ‘कमसेकम उपचार गरेपछि ठिकै नभए पनि कम त हुनुपर्छ नि। यहाँ होला जस्तो देखिएन, सिंगापुर लैजाऔं।’
डाक्टरलाई पनि थर्काइन्, ‘यहाँ हुँदैन भने सिंगापुर लैजान्छौं, डिस्चार्ज गरिदिनुस्।’सिंगापुर लैजानलाई प्राइभेट एयर एम्बुलेन्ससँग सम्पर्क पनि भयो। त्यहीबेला डाक्टरले श्रीकृष्णको पेट र सिटी स्क्यान गराए। पटक–पटकको आग्रहपछि डाक्टरले श्वेतालाई झर्कंदै सुनाए, ‘उहाँलाई क्यान्सर भएको छ।’
श्वेता एकाएक छाँगाबाट खसेझै भइन्। दिउँसै उनलाई अँध्यारो महसुस भयो। लाग्यो, क्यान्सर उनका श्रीमान्लाई मात्र होइन, आफ्ना सपनाहरूमा पनि लाग्यो।
अस्पताल पु-याएको २१ दिन र बिहे भएको २३ दिनपछि श्रीमान्लाई क्यान्सर लागेको खबर सुन्नुपर्दा कुन श्रीमतीको मन थामिएला र ? चार घन्टासम्म लगातार रोइरहिन् उनी। डाक्टर, दाइ, दिदी, नर्स सबैले सम्झाए, ‘तिमी रोयौ भने श्रीमान्लाई झन् गाह्रो हुन्छ, त्यसैले तिमी बलियो हुुनुपर्छ।’
डाक्टरले दुखाइ कम होस् भनेर श्रीकृष्णलाई ‘हाइ डोज’ पेन किलर खुवाउँथे। श्वेताका अनुसार उनलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको पेन किलर खुवाइयो।क्यान्सर पहिचान भएपछि आफैंलाई सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा थिइन् श्वेता। लुकीलुकी पेन किलर खान्थिन्।
श्रीमान् बाँच्ने अलिकति आशाले मात्रै उनलाई बलियो बनाएको थियो। क्यान्सर पहिचान भएको सात दिनपछि श्रीकृष्णले अस्पतालमै प्राण त्यागे। त्यसपछि उनी आफै कमजोर हुँदै गइन्।
‘त्यसपछि म बेहोस भएछु। मलाई त नेपाल ल्याइसकिएको रहेछ। होस आउँदा पो थाहा पाएँ,’ त्यो क्षण सम्झँदा उनका आँखामा डम्म आँसु भरिन्छन्, ‘त्यतिबेला डाक्टरले उहाँलाई जे खान दिए पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज महसुस हुन्छ, सायद नबाच्ने संकेत देखेर त्यसो भन्नुभएको रहेछ।’
श्रीमान्को मृत्युपछि श्वेताका धेरै दिन रोएरै बिते। उनका लागि त्यो जीवनकै असह्य पीडा थियो। ‘साँच्चै जीवनको यो विन्दुमा कहीँँकतै उज्यालो थिएन,’ विरक्त भावमा उनले भनिन्, ‘तर जीवन हो, आइपरेको स्थितिसँग लड्नैपर्ने रहेछ।’
श्रीमान् बितेको एक महिनापछि उनलाई ग्यास्ट्रिकले सतायो। औषधि खान थलिन्। तीन महिनापछि पनि निको भएन। अस्पताल जाँदा थाहा भयो, उनलाई डिप्रेसन भइसकेको रहेछ।डिप्रेसनको औषधि लिन थालेको केही महिनापछि नै उनलाई ‘ब्याक पेन’ले सतायो। हिँड्नलाई देब्रे खुट्टाले सहारा दिन छाड्यो।
श्वेताले आफू नै बिरामी भएर हस्पिटलमा रात बिताउनुपरेको चाहिँ श्रीमान्को मृत्युपछि नै हो। त्यो वियोगको ६ महिनासम्म त उनले घरमै बेडरेस्ट गरिन्।
न कोहीसँग बोल्न मन लाग्ने, न आफन्तलाई राम्रोसँग रेस्पोन्स नै दिने। ढाड दुख्न थालेपछि त बाथ टबमा नुहाउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। भन्छिन्, ‘डिप्रेसनले गर्दा मलाई नै क्यान्सर हुन्छ र मर्छु कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो।’
एकैचोटी ग्यास्ट्रिक, ब्याक पेन, डिप्रेसन लगायत थुप्रै रोगले घेरेपछि अब जीवन सामान्य होला भन्ने उनलाई लाग्न छाडिसकेको थियो।श्रीमान्ले त बिहे गरेको एक महिनामा पत्याउनै नसक्ने गरी छोडेर जाँदा रहेछन् भने यो जिन्दगीको के भर ? मनमा यस्तै तर्कनाले घर गर्थे।
श्रीमान्को मृत्युपछि उनमा हस्पिटलप्रतिको विश्वास पनि उडिसकेको थियो। त्यसैले पहिलोपल्ट ग्रान्डी हस्पिटल पुर्‍याउँदा उनलाई परिवारले झुक्याएर लगेका थिए। ‘त्यतिबेला सिटीस्क्यान र एमआरआईको फस्ट टाइम टेस्ट लिँदा एकदमै रोएको थिएँ,’ उनी सम्झन्छिन्।
पटकपटक ब्लड टेस्ट गरिरहनुपथ्र्यो। कतिपल्ट त हस्पिटल जान नमानेपछि डाक्टरहरू ‘ब्लड स्याम्पल’ लिन घरमै आइपुग्थे।६ महिनासम्म पनि ठिक नभएपछि उनलाई अस्ट्रेलिया पु¥याइयो। तर त्यहाँबाट फर्केर आउँदा पनि पार लागेन।
अस्ट्रेलियाको औषधिले पनि काम नगरेपछि उनलाई अमेरिका पठाइयो। श्वेताको परिवार पनि त्यतै बस्ने भएकाले हेरचाहमा सजिलो भयो। डिप्रेसनको औषधि खान थालिन्। थेरापी गर्न थालिन्।
यसरी चार महिनाको अमेरिका बसाइपछि उनी फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किइन्। त्यसपछि उनलाई लाग्यो, ‘अबचाहिँ म बाँच्ने रहेछु।’
‘दादा (श्रीकृष्ण) बित्नुभएपछि म सामान्य अवस्थामा फर्किन्छु भन्ने सोचेको थिइनँ। बाँच्छुजस्तो लागेको थिएन, त्यसैले रिकभर भएपछिको अवस्थालाई मैले मेरो दोस्रो जीवन ठानेँ,’ उनले भनिन्।
दोस्रो जीवन पाएपछि पनि श्वेतालाई अस्पतालले बोलाउन भने छाडेन। घाँटीमा टन्सिल भइरहन थाल्यो। उपचारका लागि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भइन्। त्यसअघि ग्यास्ट्रिक र ‘फुड पोइजन’ हुँदा पनि उनी त्यहाँ बस्नुपरेको थियो।
लन्डन या दिल्लीमा गएर हटाउने निर्णय गरिन्। त्यसअघि ‘हेल्लो जिन्दगी’ फिल्मको सुटिङका लागि लन्डन जानुपर्ने थियो। एक महिनापछि उपचार गराउने गरी उनी डाक्टरकै सल्लाहमा लन्डन पुगिन्।
लन्डनमा सुटिङ गरिरहेकै बेला घाँटीमाथि र चिउडो नजिकैका भागमा असाध्यै दुख्न थालेपछि उनले त्यतैबाट डाक्टरलाई फोन गरेर सबै अवस्था सुनाइन्।
डाक्टरले सल्लाह दिए, ‘त्यसो हो भने तत्काल अस्पताल गएर हटाइहाल्नुस्, नत्र इन्फेक्सन हुन सक्छ।’
त्यसपछि उनले लन्डनस्थित सुटिङस्थलबाटै एयर एम्बुलेन्समार्फत सिधै नयाँ दिल्लीस्थित बिएलके अस्पतालमा भर्ना भइन्। भारतका चर्चित चिकित्सक डा एसके दवाजले उनको ट्युमरको शल्यक्रिया गरे।
३२ एमएमको ट्युमर रहेछ। डाक्टरले शल्यक्रिया हुनासाथ बधाई दिए, ‘बधाई छ, क्यान्सर भएको छैन, नयाँ जीवनको शुभकामना।’त्यतिबेला मात्रै श्वेतालाई थाहा भयो– क्यान्सरको सम्भावना पो रहेछ।
अझै पनि उनको मुख पूरै सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन। झन् शल्यक्रिया हुनेबित्तिकै त बाङ्गो प्रस्टै महसुस हुन्थ्यो। ‘वि विल राइज’ कार्यक्रममा भाषण दिएको भिडियो हेर्दा उनलाई आफै नराम्रो लागेको थियो। ‘त्यसपछि इन्टरभ्यू दिन नै अभोइड गरेँ,’ उनले बाध्यता पोखिन्।गफैगफमा संवाददाताले सोध्यो, ‘तपाईंलाई यो हस्पिटल खुब प्रेम गर्छ है ?’
जावलाखेलस्थित नेसनल क्यान्सर हस्पिटलमा उनले साझेदारी गरेकी छिन्। त्यही हस्पिटलमा उनका भिनाजुले अन्तिम सास फेरेका हुन्। ‘मैले मेरा आफ्नाहरू क्यान्सरका कारण बिताएँ, अब अरूले गुमाउनु नपरोस्। म त्यस्ता बिरामीलाई सहयोग गर्न सकूँ भनेर हस्पिटलमा लगानी गरेको हुँ,’ श्वेताले सुनाइन्।
श्वेताले नेपाल र बाहिर दुवैतिरका अस्पतालमा रात कटाउनुपरेको छ, बिरामी र कुरुवा दुवै बनेर।बाहिर र यहाँका अस्पतालबीच के भिन्नता महसुस भयो? संवाददाताको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मैले मेरो भिनाजुलाई लापरबाहीका कारण गुमाउनुपरेको हो। टिचिङ हस्पिटलबाट मैले रिसाएर डिस्चार्ज गरेको हो। टिचिङमा सधैं टिचिङमात्रै भएको देखेँ। मान्छेलाई त्यहाँ मर्फिन दिएर राखेको हुन्छ, जुन लास्ट स्टेजमा दिनुपर्ने हो। अनि, स्टुडेन्ट ल्याएर पढाइरहेको हुन्छ, बिरामी भने दुखाइले रोइरहेको। आफै कल्पना गर्नुस्, योभन्दा खेलाँची दृश्य अरू के हुन सक्छ !’
श्वेतालाई बितेका पाँच वर्षमा सानादेखि ठूला सबैखाले रोगले सताए। रोगका हिसाबले उनी यो समयलाई आफ्नो जीवनकै दुःखद क्षण ठान्छिन्, तर व्यापारमा सफलता पाएका हिसाबले खुसीको क्षण पनि।
‘कतिपय त भन्न नमिल्ने क्षणहरू पनि मैले भोगेँ जुन म अहिले खुलाउन चाहन्न। कुनै दिन किताब लेखेँ भने पक्कै खुलाउनेछु,’ उनी भन्दै थिइन्।
श्वेता अहिले आफूले बाँचिरहेका जीवनलाई ‘तेस्रो जीवन’ ठान्छिन्। तर, यो जीवनका लागि उनले नयाँ जीवनसाथी बनाएकी भने छैनन्।ठट्टैठट्टामा सोधियो, ‘नयाँ जीवनमा नयाँ जीवनसाथीको प्रवेश कहिले हुने हो ?’
‘बिहे त मान्छेको जीवनमा एउटा प्रमाणपत्र मात्रै हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा त खुसी हो। यो माथिबाटै लेखेर आएको हुने रहेछ। श्रीकृष्ण दादासँग जुरेको थियो, त्यसैले भयो। घरबाट ममी÷ड्याडीको दबाब त छ तर मचाहिँ बिहे गर्छु भन्ने स्थितिमा पुगिसकेको छैन। कुनै दिन महसुस भयो भने सबैभन्दा सुरुमा तपाईंलाई नै भनौंला,’ उनको यो जवाफसँगै बातचितलाई हामीले बिट मार्‍यौं।
फिल्म ‘आमा’की निर्मात्री शर्मिला पाण्डेले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा फिल्म निर्माता स्वर्गीय केशव भट्टराईको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेकी छिन् । फिल्म ‘आमा’को तर्फबाट निर्मात्री पाण्डे, निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल, कलाकार मिथिला शर्माले स्वर्गीय केशव भट्टराईकी श्रीमती नीता भट्टराईलाई नगद १ लाख १ हजार सहयोग गर्दै आमाको मर्म बुझेर यो दुखद अवस्थामा केही राहात दिनका […]
नौ अभिनेत्रीलाई नवदुर्गा सम्मान
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रको प्रथम अभिनेत्रीदेखि अहिले चल्तीमा रकहेका अभिनेत्री समेटेर राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मान गरिने भएको छ । राष्ट्रिय नवदुर्गा सम्मान तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमसहित गरि यो सम्मान कार्यक्रममा विभिन्न नौ अभिनेत्रीलाई सम्मान गरिदै छ । सम्मानित हुने अभिनेत्रीहरुमा नेपालकै पहिलो चलचित्र ‘आमा’की अभिनेत्रीहरु भुवन चन्द तथा बसुन्धरा भूषाल, गौरी मल्ल, करिष्मा मानन्धर, नम्रता श्रेष्ठ, दीपाश्री […]